आमाको अगाडि छोरी छट्प’टाउँदै म’र्दा कति द’र्द भयो होला ?
नेपालगन्ज : नेपाल बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालको शय्यामा एक अधबैंसे महिला आ’लाप-विला’प गरिरहेकी थिइन् । आई’सीयू मनिटरको च’र्को आवाजले बोली प्र’ष्ट नसुनिए पनि ‘मेरो मुटुको टु’क्रा…मेरो मुटुको टु’क्रा…’ भनेको विर’क्त चि’च्याहट बाहिरसम्म सुनिइरहेको थियो ।
उनी बोलिरहँदा बेडमा रहेका अन्दाजी बीस-पच्चीस वर्षका युवाको शरीर अनिय’न्त्रित थियो । अ’क्सिजन सपोर्टमा छट्प’टाइरहेका ती युवा भएभरको शक्ति खर्चे’र बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहेका थिए । रातो कुर्ता सलवारमा भएकी ती महिलाको भावभंगीले ठूलो सं’कट बोलिरहेको थियो । शायद उनी आमा थिइन् ।
यो बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालको आई’सीयूमा शनिबार देखिएको दृश्य हो । १८ जना गम्भीर किसिमका को’रोना संक्र’मित राखिएको उक्त आई’सीयू वार्डमा शनिबार मात्रै चार सं’क्रमितको मृ’त्यु भयो । सोही अस्पतालका अन्य वार्डमा गरेर गएको दुई दिनमै त्यहाँ १२ जना संक्र’मितले ज्या’न गु-मा’ए ।
यो तथ्यांक जस्तै डरलाग्दो दृश्य अस्पतालमा जताततै देखिइरहेको थियो । उक्त अस्पतालको आई’सीयू वार्डमा हरेक बेडमा एक जना कुरुवा छन्, कोही सं’क्रमितलाई घो’प्टो पारेर ढाडमा थ’पथपाइरहेका छन् भने कोही पंखाले ह’म्किइरहेका छन् ।
कोही रक्त सञ्चार अवरु’द्ध नहोस् भनेर मालिस गरिरहेका छन् भने कोही बि’रामीको हो’श नगु’मोस् भनेर झ’कझक्याइरहेका छन् । अक्सि’जन मनि’टरको च’र्को आवाज, सं’क्रमित र कुरुवाको अत्यासलाग्दो चीत्कार, बेडबाटै भु’इर्ंमा खसौंला झैं लाग्ने संक्रमि’तको अनि’यन्त्रित छ’ट्पटाहट । बाँके जिल्लाको को’रोना महामा’रीको अवस्था बोल्ने दृश्यहरू थिए, ती ।
आईसीयू वार्डभित्र जस्तै अ’क्सिजन कम भएर बाहिर पनि संक्र’मितहरू छट्प’टाइरहेका थिए । सं’क्रमितका आफन्तहरू ‘भित्र बेड खाली होला कि’ भन्ने प्रतीक्षामा थिए । त्यो प्रतीक्षाको लाइन छिनमै लामो हुन्थ्यो ।
त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले अक्सि’जन विना बाँच्न नसक्ने संक्र’मितलाई अन्य वार्डमा भए पनि अ’क्सिजनको सहारा दिएर भित्र राख्थे भने केही संक्र’मितलाई ‘अवस्था नाजुक भइनसकेको’ भन्दै फ’र्काउन ला’चार हुन्थे ।
त्यहीबेला एकै पटक तीन जना संक्र’मितलाई सास फे’र्न गा’ह्रो भएको भन्दै ल्याइयो । तीनमध्ये दुई पुरुष क्रमशः ६५ र ५५ वर्षका थिए भने एक महिला ३५ वर्षकी थिइन् । संक्रमितका आफन्तका अनुसार उनीहरूको अ’क्सिजनको लेभल ८५ भन्दा तल थियो ।
ट्र’लीमा हालेका उनीहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् तर केही इ’शारा गरेर छट्प’टाइरहेका थिए । उनीहरूको इ’शारा नबुझेर हैरान बनेका आफन्तहरू अस्पतालमा बेड नपाएर झन् वि’क्षिप्त थिए ।
आमाको लागि आईसीयू बेडको प्रतीक्षामा रहेका १८ वर्षीय छोराले फोनमा कसैलाई भने, ‘आमा छट्प’टाएर म’र्न लागिसक्नुभो, यहाँ अस्पतालमा बेड छैन रहेछ, छ’ट्पटाएरै सास जान्छ कि जस्तो छ ।’
त्यही बेला त्यहाँ आइपुगेका ड्यु’टी डाक्टरलाई उनले समस्या सुनाए । ‘सिकिस्त बिरामीलाई आईसीयूबाट झि’केर मर्न दिनुभएन, समस्या बुझ्नु न । बरु पल्लो वार्डमा लैजानुस्, त्यहाँ केही व्यवस्थापन होला कि’ डाक्टरको जवाफ थियो ।
त्यता बेड नपाएर यता आएका उनी किन मान्थे र ? उनीहरूले डाक्टरलाई हात जोड्दै रु’ञ्चे स्वरमा भने, ‘प्लिज केही उपाय गरेर हाम्रो मान्छे बचाइदिनुस् !’
ड्यु’टी डाक्टर दुवै हातले टाउको (पु’र्पुरो) ठो’क्दै भित्र पसे । डाक्टरको त्यो हाउभाउमा नि’राशा र ला’चारी प्र’ष्ट देखिन्थ्यो भने संक्र’मितका आफन्तहरू झन् बि’चरा देखिएका थिए ।
त्यही बेला संक्र’मितको छट्प’टाहट झन् अनि’यन्त्रित भयो । बिरा’मी लिएर आएका कुरुवाहरूसँग अ’त्तालिनु र सम्हा’लिनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । अस्पतालको भ’या’वह अवस्थाले उनीहरू मृ’ त्यु स्वीकार्ने पक्षमा पुगिसकेका थिए । त्यहीमध्येका एक आफन्तले भने, ‘हाम्रो त शासकै शत्रु भए, देशमा यस्तो भयावह अवस्था हुँदा कसैलाई मतलब छैन ।’
सास फेर्न गा’ह्रो भएर अस्पताल ल्याएका बुवाको लागि बेड नपाउँदा आक्रोशित भएका उनी अक्सि’जन सहितको बेडमा भर्ना पाएका संक्र\_मितले डाक्टर र नर्सको सेवा नपाएको देखेर झन् विक्षिप्त भएका थिए । लामो सुस्केरा हाल्दै भने, ‘यो हदसम्मको भ’याव’ह होला भन्ने त कल्पनै थिएन !’
त्यही बेला ड्यु’टी डाक्टर आएर भने, ‘अ’क्सिजन सिलि’ण्डरको व्यवस्था गरेका छौं, बेड खाली छैन, भुईमा राख्नुपर्छ ।’
सं’क्रमितका आफन्तले डाक्टरको जयजयकार गर्दै बि’रामीलाई भित्र लगे ।
१४२ जना को-भिड बिरा’मी राख्ने क्षमता भएको उक्त अस्पतालमा २०० भन्दा बढी संक्र’मित नाघिसकेका छन् । को’रोनाको लागि बाहेक अन्य रोगको उ’पचारको लागि छुट्याइएका वार्डहरूमा अ’क्सिजन जडान गरेर सं’क्रमितको उपचार गरिएको छ । सास फेर्न गाह्रो भएर अक्सि’जन जडान गरेका सबै संक्रमितले नर्स र डाक्टरको सेवा पाउने अवस्था छैन । सुस्केरा हाल्दै ‘भगवान भरोसा…’ भनिरहेका छन् सं’क्रमितका आफन्त ।
आईसीयू वार्ड बाहिर ४१ वर्षीय सन्तोष ओली भेटिए । उनकी ३४ वर्षीया श्रीमती सिकि’स्त भएर आ’ईसीयू वार्डमा उप’चाररत छिन् । सन्तोषका अनुसार आमासँगै आ\_ईसीयूमा भर्ना भएकी २१ वर्षकी छोरीको यही अस्पतालमा ६ दिन अगाडि संक्र’मणकै कारण मृ’ त्यु भयो ।
हामीसँग कुराकानी गर्दागर्दै ‘छोरीले तीन महिने छोरीलाई’ (सन्तोषकी नातिनी) एक्लै छाडेर गई भन्दै सन्तोष भ’क्कानिएका थिए । आईसीयू वार्डमा छोरीले छट्प’टाउँदै प्रा’ण त्यागेको देख्दादेख्दै केही गर्न नसकेको सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘यहाँ आएको दिनदेखि मैले दिनकै छट्प’टाउँदै मानिस म’रेको देखेको छु ।’
२१ वर्षकी छोरीको मृ’ त्यु सहेर संक्र’मित श्रीमतीको कुरुवा बसेका उनी विक्षिप्त छन् । छोरीले छट्प’टाउँदै अन्तिम सास फेरेको देखेका उनकी श्रीमती पनि आईसीयूमै अर्धचेत अवस्थामा छिन् । ‘
आमाको अगाडि छोरी छट्प’टाउँदै मर्दा कति दर्द भयो होला ? म छोरी मरेको बेड हेर्न सक्दिनँ भन्दै भक्कानो छाडेर रुन्छे’ श्रीमतीको अवस्था बताउँदै सन्तोष भन्छन्, ‘डाक्टरले त श्रीमतीलाई भन्दा योङ छोरीलाई बचाउन सजिलो हुन्छ भन्थे ।’
सन्तोष मनको वह पोख्दा पोख्दै आफैंलाई जवाफ दिन्छन्, ‘मेरो जस्तो एकै परिवारका सं’क्रमित र मृ’ त्यु हुने त धेरै पो छन् हौ !’
उनले यसरी नै आफ्नो मन बुझाएका छन्, तर आई’सीयूमा सं’क्रमित भएर छट्प’टाइरहेकी श्रीमतीलाई बुझाउन नसक्दा हैरान भएको सुनाउँछन् ।
अस्पतालमा न’र्सिङ जनशक्तिको अ’भाव भएकाले पनि धेरै सं’क्रमितको मृ’ त्यु भएको सन्तोष सुनाउँछन् । अ’क्सिजन र इन्जे’क्सन दिन दौडादौड हुँदा पनि जनशक्ति नथप्नुको प’रिणाम झन् भ’या’वह हुनसक्ने उनको अनुमान छ । उनका अनुसार यत्रो धेरै सं’क्रमि’तलाई हेर्ने पाँच जना मात्रै स्टाफ नर्स भएकाले पनि संक्र’मितका कु’रुवालाई ड’र छ ।
‘दिउँसो भन्दा राति बिरामीका कुरुवा आत्तिन्छन्, किनकि अ’क्सिजन सकिन्छ या पाइप खुस्किन्छ कि भन्ने डर हुन्छ’ सन्तोष भन्छन्, ‘तर यस्तो भ’या’वह हुँदा पनि राज्यले जनशक्ति नपठाउनु अ’परा’धै गरेको हो, यति थोरै चि’कित्सकले धन्न धा’नेका छन् ।’
त्यसैगरी आईसीयू वार्ड अगाडि २६ वर्षीय सुदिपकुमार लाखी भेटिए । आफैं सं’क्र’मित भएका उनी ५८ वर्षीय बुवाको कुरुवा हुन् । ८ दिनदेखि बुवालाई आईसीयूमा भ_र्ना गरेर उनी त्यही दौड’धूप गरिरहेका छन् । अस्पतालमा जनशक्ति अ’भावको कारण सबै सं’क्रमितले दुःख पाएको उनको गुना’सो छ । डाक्टर र नर्सले हेर्न नभ्याएको कारण कतिपय सं’क्रमि’तको मृ’ त्यु भएको आˆनै आँखाले देखेको उनी दाबी गर्छन् ।
‘अस्पतालका डाक्टरहरू ज’नशक्तिको अ’भाव छ भन्नुहुन्छ, एक जना पनि कुरुवाहरू भएनन् भने त सं’क्र’मित बचाउन गाह्रो हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यही वार्डमा मात्रै पाँच जनाको मृ’ त्यु भएको मेरै आँखाले देखेको छु ।’
भेरी अस्पतालमा भएको संक्र’मितको मृ’ त्युको तथ्यांक र अवस्था हेर्दा को’रोना महामा’रीले त्यहाँ थप क्षति पु¥र्‍याउने प्रष्ट देखिन्छ । किनकि, आईसीयूभित्र अत्यन्तै सि’किस्त बि’रामीहरू मृ’ त्युसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । मृ’ त्यु देखे पनि आˆनो बिरामीलाई त्यो अवस्थामा पुग्न नदिन बिरा’मीका कुरुवाहरू समेत सक्दो मिहिनेत गरिरहेका छन् । एक चिकि’त्सक भन्छन्, ‘कुरुवाहरूको प’रीक्षण गर्ने हो भने सबैजसो सं’क्रमित भइसके होलान् । यहीमध्ये धेरै त सि’किस्त हुनेवाला छन् र, उनीहरूलाई बेड मिलाउन उस्तै महाभारत हुन्छ ।’
त्यहीबेला आईसीयूभित्रबाट चर्को आवाज आयो, ‘डाक्टर डाक्टर…’
आवाज सुनेपछि डाक्टर र नर्स दौ’ड्दै त्यहाँ गए । बाहिर बसेका अ’र्का कुरुवाले भने, ‘संविधानसभा सदस्य मो’हम्मद सिद्दिकीका लागि दौ’डिएका हुन्, उनको अवस्था जटिल छ ।’ त्यसको केही समयपछि सिद्दिकीको मृ’ त्यु भएको खबर आयो ।
सि’द्दिकीको मृ’ त्यु हुनु अगाडि मात्रै त्यही आ’ईसीयू वार्डमा ७२ वर्षीय एक महिलाको उपचारकै क्रममा मृ’ त्यु भएको थियो । सिद्दिकीको मृ’ त्यु भएको साढे दुई घण्टापछि सोही अस्पतालमा फेरि ४७ वर्षीय अर्की एक महिलाको मृ’ त्यु भयो । त्यसको दुई घण्टापछि ६० वर्षीय पुरुषले भाइरससँगको अन्तिम लडाइँ जित्न सकेनन् ।
‘योभन्दा भ’या’वह र बेहा’ल अरू के हुन्छ ? हामीसँग नर्स र डाक्टरको जनशक्ति अलि धेरै भएको भए अवस्था सुधा’र गर्न सकिन्थ्यो’ भेरी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर राजन पाण्डे भन्छन् ।
जटिल किसिमको को’रोना संक्र’मित राखिएको आईसीयूमा बिरामीको कुरुवा ! सुन्दा जोकोहीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर यो भेरी अस्पतालको यथार्थ हो । अनि महामा’री भ’या’वह भएको अस्पतालमा जनशक्ति दिन नसक्ने राज्यको कु|रुप तस्वीर पनि ।
भेरी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर पाण्डेका अनुसार अस्पतालमा ३९ जना नर्स छन्, जसमध्ये एक द’र्जन जति सं’क्रमित भइसकेका छन् । बाँकी नर्सले तीन सि’फ्टमा भाग लगाएर २०० भन्दा संक्र’मितको उपचार धानिरहेका छन् । त्यति धेरै क्रि’टिकल बि’रामी धान्ने एने’स्थे’सियाका कर्मचारी एक जना मात्रै छन् ।
आईसीयूमा राखिएका ज’टिल किसिमका संक्र’मितलाई यति थोरै जन’शक्तिले उप’चार गर्न असम्भव रहेको अस्पतालका चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
३० वर्षीय बैनीलाई ६ दिनदेखि आईसीयूमा राखेका रोल्पाका एक कुरुवा भन्छन्, ‘यत्रो धेरै सं’क्रमितलाई पाँच जना नर्सले कसरी धान्नु, डाक्टरहरू झन् थोरै छन् । राज्यले जनशक्ति दिनुपर्दैन ? यो त सारै नै बिजोक भयो !’
१० दिनदेखि श्रीमतीलाई आई’सीयूमा राखेर कुरुवा बसेका हवल्दारपुरका ४१ वर्षीय सन्तोष थापालाई अस्पतालको अवस्था देखेर डर लागिसक्यो । हरेक दिन मृ’ त्यु देखेका उनलाई राति श्रीमतीको मृ’ त्यु हुने हो कि भन्ने ड’र लाग्छ ।
कहीं बाहिर निस्कँदा अक्सि’जन मास्क खु’स्किएला कि भनेर डरले निदाउन सक्दैनन् । ‘कतिपय सं’ क्रमित त ल्याएको एक/दुई घण्टामै मर्छन्, कतिपय चाहिं दुई/तीन दिन बाँचेर मर्छन्’ सन्तोष अत्ता’लिंदै भन्छन्, ‘अस्पतालमा भ’र्ना गरेको ६ दिनभन्दा बढी टि’क्यो भनेचाहिं मान्छे बाँच्छ भन्ने आश हुँदोरहेछ ।’
सन्तोषले रातको समयमा धेरै संक्र\_मितको मृ’त्यु भएको देखेका छन् । उनका अनुसार रातपरेपछि न’र्स र कुरुवाहरू निदाउने भएकाले बि’रामी यताउता छट्प’टाउँदा अ\_क्सिजनको पाइप खु’स्किन्छ । एक दिन उनले नि’द्रामा ‘फ्याट… फ्याट….’ गरेको आवाज सुने । के भएछ भनेर अ’त्तालिंदै ब्युँझिंदा उनकी श्रीमती छट्प’टाइरहेकी थिइन् । त्यसपछि उनले नर्सलाई बोलाएर श्रीमतीको बचाउ गरे ।
‘म नब्युँझिएको भए त श्रीमती छट्पटाउँदै मर्ने रहिछन्, कुरुवा निदाएको बेला सं’क्रमित छट्प’टाउँदा अक्सि’जन मास्क खुस्किने भएकाले सबै संक्र’मितका आफन्त निदाउन डराउँछन् । यहाँ छिट्टै जनशक्ति थप गरिएन भने धेरैको मृ’ त्यु हुने देख्छु म’, उनी सुनाउँछन् ।
पहिलो चरणको महामारीमा १० देखि २० प्रतिशत संक्रमित जटिल र ८० प्रतिशत सामान्य थिए भने अहिले २० प्रतिशत सामान्य तर ८० प्रतिशत ज’टिल भएको डा. पाण्डे बताउँछन् ।
बेड, जनशक्तिको अभाव र भाइरसको डरको बाबजूद चिकित्सकहरू दिन-रात खटिइरहेका छन् । ‘यहीं नआइकन यहाँको विक’राल अवस्था देख्न र बुझ्न सकिन्न, यूरोपको भन्दा केही फरक अवस्था छ त ?’ डा. पाण्डे हामीसँग प्रश्न गर्छन् ।
पाण्डेका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि नेपालगञ्जमा संक्र’मित भेटिने क्रम बढेको हो । बाँके जिल्लामा त्यस दिनयता ३० भन्दा बढी संक्र’मितको मृ’ त्यु भइसक्यो । यहाँ बेड नभएर अन्य ठाउँमा रे’फर हुने संक्र’मितको रेकर्ड छैन । अस्पतालमा बसेकाको भन्दा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको संख्या धेरै छ ।
साधारण वार्डदेखि आइसो’लेसन र आईसीयू सबैमा सं’क्रमित भरिएकाले सं’क्रमित भएका चिकित्सकलाई नै त्यहाँ उपचार गर्न नसकिएको डा. पाण्डे बताउँछन् । ‘कोही सं क्रमितको मृ’ त्यु होला र हाम्रो बिरामी राखुँला भनेर मानिसहरू पालो कुर्ने अवस्थामा छन्’ अस्पतालको अवस्था वर्णन गर्दै डा. पाण्डेले भने ।
अहिलेसम्म अस्पतालमा भर्ना भएका सबै संक्र’मितलाई अ’क्सिजन जडान गरिएको छ । १० दिनअघिसम्म बि’रामी नभएर अस्पतालका एचडीयू वार्डहरू बन्द थिए भने अहिले बेड खाली नभएर बिरामी फर्काउनु परेको डा. पाण्डे बताउँछन् ।
‘महामारी शुरू हुनुअघि हाम्रोमा जम्मा ६ बेड मात्र आईसीयू थियो अहिले लगभग १४२ अ’क्सिजन मनिटर सहितको बेड हुँदा पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन’, पाण्डे भन्छन् ।
संक्र’मितका कुरुवा विना न’र्सिङ जनशक्तिले मात्र धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले औषधि र इन्जेक्सन दिने काम नर्सिङ जनशक्तिलाई जिम्मा दिएर संक्र’मित व्यवस्थापनको काम कुरुवालाई दिन बाध्य भएको डा. पाण्डे बताउँछन् ।
पाण्डेले भने, ‘कुरुवा नराख्ने हो भने बिरा’मीको अवस्था झन् बेहाल हुन्छ । यो बेला कम्तीमा पनि २०० जना नर्सिङ कर्मचारी चाहिन्छ, हाम्रोमा ३९ जना मात्रै छन्, त्यही पनि एक दर्जन संक्र’मित भएका छन् ।’
महामा”री वि’रुद्ध ल’ड्न नर्सिङ जनशक्ति र एने’थेस्टोलो’जिस्ट सयौंको संख्यामा राज्यसँग माग गरेको डा. पाण्डे बताउँछन् । पहिले ६ वटा आईसीयू बेड चलाउने जनशक्तिले अहिले १६० भन्दा बढी बेड सञ्चालन गर्दा आपत् परेको उनको भनाइ छ ।
डा. पाण्डेका अनुसार, ड्युटी डाक्टर र नर्स २४सै घण्टा काम गर्दा पनि बिरामी हे’र्न भ्याउने अवस्था छैन । बिरामीको छ’ट्पटा’हट, कुरुवाको चि’च्याहट र मृ’त्युसँग अन्तिम लडा’इँ लडिरहेका बि’रामीको ना’जुक अवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक तनाव छ ।
उनी भन्छन्, ‘धन्न गत असोजमा १४२ वटा एच’डीयू थपियो र अहिले थोरै भए पनि राहत भएको छ, नत्र यत्रो बि’रामी धान्न कहाँबाट सक्नु, यहाँ भागाभाग हुन्थ्यो ।’
सं’क्रमणकै कारण आफ्नो परिवारको सदस्य गुमा’एकी अस्पतालकी नर्सिङ इ’ञ्चार्ज शिला शर्माका एक आफन्त आईसी’यूमा उपचा’ररत छन् । अस्पतालमा बेडको जोहो गरेर क्षमताभन्दा बढी सं’क्रमितलाई उपचार दिइरहेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार त्यहाँ भर्ना भएका सबै बिरा’मी एकदमै क्रि’टिकल अवस्थाका छन् । तर अन्यलाई अक्सि’जन मात्रै दिन सकिए तापनि ५० जनालाई आईसीयू लेभलको के’यर दिन सकिएको छ ।
जनशक्तिको अभावका कारण काम गर्न सकस भएको बताउने उनी भन्छिन्, ‘एक जना नर्सले २५ जना क्रि’टिकल बि’रामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यही कारण हामीले राम्रो सेवा दिन सकेका छैनौं ।’
जनशक्ति अभावकै कारण उपचारको क्रममा बिरा’मी कुरुवालाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको उनी बताउँछिन् । राज्यले नर्स, पारा’मेडिक्स, एनेस्थे’सियाको जनशक्ति र हेल्थ एसि’स्टेन्टहरू थप गरिदिए काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी बेडको अभावले गर्दा बिरा’मीसँग डिल गर्न गा’ह्रो भएको अनुभव उनको छ । ‘ल्याइएका सबै बिरामी गम्भीर छन्, अक्सि’जन दिनुपर्ने अवस्था छ । तर बेड खाली छैन, हामी केही गर्न नसकेर लाचार छौं’, उनी लामो सुस्के’रा फेर्दै बोल्छिन् ।
भेरी अस्पतालमा शनिबार साँझ पाँच घण्टा बस्दा संक्र’मितको बेहा’ल र अस्पताल कर्मचारीको बाध्य’ताको दृश्य जताततै देखियो । यति ठूलो महामा’री एउटा अस्पतालको पूर्वा’धार र जनशक्तिले धान्न नसक्ने प्रष्ट छ । त्यहाँका चिकि’त्सकहरूको ची’त्कार छ, ‘लौन सरकार हामीलाई सहयोग गर, हामी झन् भ’याव’ह अवस्था सामना गर्न नसक्ने भइसकेका छौं !’ नयाँ बाटो
२०७८ बैशाख १३, सोमबार ०५:४४ गते2Minutes 1039 Views